AbakwaDiscovery 'bayalela owesifazane okhulelwe akabuyise imishanguzo' | News24
AbakwaDiscovery 'bayalela owesifazane okhulelwe akabuyise imishanguzo'
EGoli - Owesifazane onamasonto angu-38 ekhulelwe ubedinga imishanguzo ngokushesha ukuze kugwemeke isimo lapho igciwane lesandulela ngculazi lingasuleleka enganeni.
Lo wesifazane kubikwa ukuthi uthole le mishanguzo ngeposi ngemuva kokuthola usizo lukadokotela wakhe ohlambalaze abeDiscovery Health Medical Scheme enkundleni yezokuxhumana uTwitter.
Udokotela waseGoli uSindi van Zyl‚ ubhale enkundleni yezokuxhumana waveza ukuthi ufuna ukweneka obala imikhuba yale nkampani ngemuva kokuba iyalele lo wesifazane ukuba abuyisele imishanguzo esitolo sakwaDischem nokuyilapho eyithathe khona ngoba isicelo sakhe se-medical aid besingakaqinisekiswa.
Ngokusho kukaVan Zyl, lesi siguli sinegciwane i-HIV kanti besidinga imishanguzo yokuthithibalisa leli gciwane ngokushesha ukugwema ukusuleleka kwengane ngaleli gciwane.
OLUNYE UDABA:Kuvele imiphumela emangalisayo kwenziwa ucwaningo lwama-ARVs kone-HIV
Lokhu, ngokusho kodokotela abakhulume nabeTimeslive, iziguli ezinaleli gciwane kumele zithathe imishanguzo lapho zibona ukuthi sezikhulelwe, kodwa lesi siguli besingayithathi imishanguzo.
UVan Zyl uchazele abeDiscovery ngamafomu adingekayo waveza ukuthi leli philisi elidingekayo libiza u-R1000 kanti lisiza kakhulu ekwehliseni izinga laleli gciwane ngosuku olulodwa.
Lo dokotela ukwenze konke okudingekayo ngethemba lokuthi lesi siguli sizosizakala yize i-medical aid yakhe ingeyamanani aphansi futhi ingayikhiphi imishanguzo efana nalena.
Kuthe kusenjalo isiguli saxhumana nalo dokotela sithi sithole ucingo oluvela kwabakwaDiscovery bemtshela ukuthi akabuyisele emuva le mishanguzo uma kungenjalo sizoyikhokhela ngemali ephuma ephaketheni laso.